के हो यो सोसल मिडियामा निकै भाइरल भएको यो फोटोको सत्य? – MySansar
बीबीसीको शनिबारको समाचार अनुसार सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित पूर्वी गुटा क्षेत्रमा जारी हवाई आक्रमणमा विगत एक साताको अवधिमा पाँच सय जना भन्दा बढीको ज्यान गएको अनुगमनकर्ताहरूले बताएका छन्। मारिनेहरू मध्ये एक चौथाइ बालबालिकाहरू रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
यही समाचारसँगै सम्बन्ध जोड्ने गरी यो फोटो भाइरल बनेको हो। तर केही समय इन्टरनेटमा खोज्दा देखियो, यो अहिलेको हैन, पुरानो फोटो रहेछ।
उदाहरणका लागि यो फोटोसहितको ट्विट २०१५ को फेब्रुअरीमा नै भइसकेको देखिन्छ
#يا_قلبي طفل سوري يحمي أخته من القصف الصليبي… اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف #شاركنا_أجمل_سلفي pic.twitter.com/TWNIhdCusq
— مختلف (@muktlf) February 27, 2015
यो वेबसाइटमा पनि यो फोटो २०१५ मै आएको देखिन्छ-
रेड्डिटमा पनि यो फोटो एक वर्षअघि नै आएको देखिन्छ।
तीन वर्षअघि नै यो फोटो इन्टरनेटमा देखिए पनि कसले खिचेको र कहाँ खिचेको भन्नेबारे यकिन जानकारी भने मैले इन्टरनेटमा भेटिनँ। पछिल्लो पटक ट्विटरमा यो फोटो भाइरल गर्ने काम भने यो ह्यान्डलले गरेको देखियो-
IMAGE: Syrian child protecting his younger sister amid airstrikes. pic.twitter.com/hCr0bkM6No
— The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2018
यो लेख्दासम्म साढे ५ हजार पटक यो रिट्विट भइसकेको छ जबकि माथि तीन वर्षअघि यही फोटो राखी गरिएको ट्विट ६ पटक मात्र रिट्वविट भएको छ।
सिरियामा अहिलेको युद्धमा बालबालिकाहरु प्रभावित भएका छन्। यो खबर सत्य हो। तर फोटो अहिलेको हैन, फोटो कम्तिमा पनि तीन वर्ष पुरानो हो।